ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာ ဂျေအရ် “မေလခိဇေဒက် - ခရစ်တော်ပုံဆောင်ခြင်း” | Real Conversion
“မေလခိဇေဒက် - ခရစ်တော်ပုံဆောင်ခြင်း”
MELCHISEDEC - A TYPE OF CHRIST
(SERMON# 61 ON THE BOOK OF GENESIS)
“ကမ္ဘာဦးကျမ်းမြတ်တော်ထဲမှ ၆၁ ခုမြောက်သော ဒေသနာ”
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင် ဘုရားနေ့ညနေပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားခြင်း ။ ။
“ခေဒေါရလောမာနှင့် သူ့ဘက်ကနေသော မင်းကြီးတို့ကို လုပ်ကြံရာမှ အာဗြံပြန်လာသောအခါ၊ သောဒုံမင်းကြီးသည် ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှာ၊ ရှာဝေချိုင့်တည်းဟူသော မင်းကြီးချိုင့်သို့ ထွက်သွား၏။ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သော ရှာလင်မင်းကြီး မေလခိဇေဒက် သည်လည်း မုန့်နှင့်စပျစ်ရည်ကို ဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင် ကောင်းကင်မြေကြီးရှင်၊ အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သည် အာဗြံကိုကောင်းချီး ပေးတော်မူပါစေ သော်ဟု အာဗြံကို ကောင်းကြီးပေး၍ သင်၏ရန်သူတို့ကို သင်၏လက်၌ အပ်နှံတော်မူသော၊ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်လည်း မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်းဟု မြွတ်ဆို၏။ အာဗြံသည်လည်း ဥစ္စာရှိသမျှတို့ကို ထိုမင်းအား ဆယ်ဖို့ တစ်ဖို့ လှူလေ၏။ (ကမ္ဘာ ၁၄ ; ၁၇ - ၂၀)
ဟေဗြဲဩဝါဒစာ ၇း ၁-၃ ကို ဖွင့်ကြည့်ကြပါစို့။
“မင်းကြီးများကို လုပ်ကြံရာမှ ပြန်လာသော အာဗြဟံကို ခရီးဦးကြိုပြု၍၊ ကောင်းကြီးပေးပြီးလျှင် အာဗြဟံလှူသော လက်ရဥစ္စာရှိသမျှကို ဆယ်ပုံ တစ်ပုံခံယူသော ထိုရှာလင်မင်းကြီးတည်းဟူသော အမြင့်ဆုံးသော ဘုရား သခင်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်မေလခိဇေဒက်သည် နာမရင်းအနက်အားဖြင့် တရားမင်း၊ ထိုမှတစ်ပါး ငြိမ်သက်ခြင်းမင်းဟု ဆိုလိုသော ရှာလင်မင်း ဖြစ်လျက် အဘမရှိ၊ အမိမရှိ ရှေ့မျိုးစဉ်မရှိ၊ အသက်အပိုင်းအခြားမရှိဘဲ ဘုရားသခင်၏ သားတော်နှင့်တူ၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ အစဉ်အမြဲ တည်၏ (ဟေဗြဲ ၇ ; ၁ - ၃)
ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကိုဖွင့်ထားကြပါ။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး ၁၄ သည် ပထမဆုံးသော စစ်ပွဲကို မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ “ရန်သူတို့ သိမ်းသွားသော ဥစ္စာရှိသမျှကိုလည်းကောင်း၊ မိမိအစ်ကို သားလောတနှင့် သူ၏ဥစ္စာကိုလည်းကောင်း၊ မိန်းမများနှင့်လူများကိုလည်းကောင်း၊ တစ်ဖန်ဆောင်ရန်” အာဗြဟံသည် မိမိအိမ်၌ဖွား၍ သွန်သင်သော လူသုံးရာကို သွားရောက်ကယ်တင်စေသည်။ (ကမ္ဘာ ၁၄း၁၆) ။ အာတာဒဗလျူဖိန့်တ်ပြောကြားသည်မှာ -
မေလခိဇေဒက်သည် အလွန်အင်မတန် မှတ်သားဖွယ် အရေးပါသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး “ဘုရားသခင် ၏ သားတော်” နှင့် အလားတူပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ (ဟေဗြဲ ၇း၃)။ မေလခိဇေဒက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ရန် နက်နဲခက်ခဲလွန်းပေသည်။ မေလခိဇေဒက်သည် ခရစ်တော်ဘုရားပုံဆောင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ (A.W. Pink Gleaning in Genesis, Moody Press, 1981 edition P. 159)
၁။	ပထမ၊ မေလခိဇေဒက် ခရစ်တော်ပုံဆောင်ခြင်းသည် နာမရင်းအနက် တူညီ၍ဖြစ်သည်။ “မေလခိဇေဒက်အနက်သည် တရားမင်း” ဖြစ်သည် ဟေဗြဲ ၇း၂ ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
“အာဗြဟံလှူသော လက်ရဥစ္စာရှိသမျှကို ဆယ်ပုံတစ်ပုံ ခံယူသော ထိုရှာလင်မင်းကြီးတည်းဟူသော အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ် မေလခိဇေဒက်သည် နာမရင်းအနက်အားဖြင့် တရားမင်း၊ ထိုမှတစ်ပါး ငြိမ်သက်ခြင်းမင်းဟု ဆိုလိုသော ရှာလင်မင်း ဖြစ်လျှက်” (ဟေဗြဲ ၇ ; ၃)။
ပထမအနေဖြင့် မေလခိဇေဒက်သည် တရားမင်းဖြစ်၍၊ ဒုတိယအနေဖြင့် ရှာလင်မင်းကြီး အနက်သည် ငြိမ်သက်ခြင်းမင်းဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဤသည် “ခရစ်တော်ဘုရားသည် မေလဒိဇေဒက်ပုံဆောင် ခြင်း၏ ရုပ်လုံးပင်ဖြစ်၍ အပြစ်သားများအဖို့ ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ပြုခဲ့သူဖြစ်ည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား ၏ တောင်းဆိုမှုအားလုံးကို ခရစ်တော်ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားများအဖို့ လိုက်လျော့ခဲ့ပြီး ဘုရားရှင်နှင့် သင့်မြတ်ခြင်းကျေးဇူးကို ပြုခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ရောမဩဝါဒစာ အခန်းကြီး ၃ ; ၂၁ - ၂၆ ၌ ဖော်ပြထားသည်။
“ယခုမူကား အနာဂတ္တကျမ်းနှင့် ပညတ္တိကျမ်းတို့သည် သက်သေခံသည် နှင့်အညီ ပညတ်တရားနှင့် မစပ်ဆိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်း တရားကို ဖော်ပြပြီ။ ယေရှုခရစ်၏ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည် သောသူအပေါင်းတို့အဖို့ဖြစ်၍ ထိုသူအပေါင်းတို့ပေါ်သို့ ရောက်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ထင်ရှားခဲ့ပြီ။ ခြားနားခြင်း အလျင်းမရှိ။ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား လူအပေါင်းတို့သည် ဒုစရိုက် ကိုပြု၍ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အသရေပျက်ကြပြီ။ ယေရှုခရစ်၌ ရွေး နှုတ်တော်မူသောအားဖြင့် အဖိုးမပေးရဘဲ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော် ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရကြ၏။ ဘုရားသခင်သည်းခံတော်မူ သောကြောင့် လွန်ပြီးသော ဒုစရိုက်အပြစ်များကို မှတ်တော်မမူ၊ ဖြောင့် မတ်ခြင်းတရားကို ထင်ရှားစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သခင်ယေရှု၏ အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်း ဖြစ်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင် ထင်ရှားစွာ ပြတော်မူပြီ။ ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူတို့အား စွဲချက်တင်ခံရသည့် ပြစ်မှုမှ လွတ်စေ၍ ကိုယ်တော်သည် တရားသဖြင့် ပြုသူဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်တော် ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ယခုကာလ၌ ထင်ရှားစေ၏။ (ရောမ ၃ ;၂၁ - ၂၆)
ယေရှုဘုရားလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်သည် အပြစ်သားများအပေါ် ဘုရားရှင်၏ အမျက်ဒေါသအား ပြေပျောက်စေပြီး ဖြောင့်မတ်သောသူအဖြစ် လက်ခံစေပါသည်။ “ထို့ကြောင့် ငါတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်၍ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်လျှင်၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အား ဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ခံစားကြ၏။ (ရောမ ၅; ၁) ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ “လက်ဝါး ကားတိုင်ပေါ်မှာ သွန်းသော အသွေးတော်အားဖြင့် ရန်ကိုငြိမ်းစေ၍ဟု (ကောလော ၁း၂၀) ၌ ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရသည်။
မေလခိဇေဒက်သည် တရားမင်းကြီးနှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းမင်းဟူ၏။ ဤအရာများက သူသည် ပုံဆောင် ခြင်းဖြစ်၍ ခရစ်တော်ပုံဆောင်ခြင်းကို ပြသနေပါသည်။ ဓမ္မသီချင်းအဟောင်းထဲ၌ ဤကဲ့သို့ ကျူးဧထား သည်။
]အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်ရွက်သော ဘုရားသခင် သိုးသူငယ်၊ ဘုရား ဘိသိက်ခံ၊ အပြစ်သားတို့အဖို့ကိုယ်စား အသေခံ၊
အပြစ်သားများ လွတ်မြောက်စေသခင့် အသွေးတော်မြတ် သင့်မြတ် ကျေးဇူးငြိမ်သက်ခြင်း နှင့် ကောင်းကင်တံခါးဖွင့်ပြီ၊
(၁၇၂၁ - ၁၈၁၉ ဂျွန်ဘက်ဝေလ်သီကုံးသော “မြတ်မင်္ဂလာ ရှိစေ၊ ယေရှုရှင်”)။
၂။	ဒုတိယ၊ မေလခိဇေဒက် ခရစ်တော်ပုံဆောင်ခြင်းသည် စတင်သည့်အကြောင်းရင်း တူညီ၍ ဖြစ်သည်။
ဟေဗြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး ၇ ; ၃ ကို အသံကျယ်လောင်စွာ ဖတ်ကြားကြပါစို့ -
“အဘမရှိ၊ အမိမရှိ ရှေ့မျိုးစဉ်မရှိ၊ အသက်အပိုင်းအခြားမရှိဘဲ ဘုရားသခင်၏ သားတော်နှင့်တူ၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ အစဉ်အမြဲ တည်၏။ (ဟေမြဲ ၇ ; ၃)
မေလခိဇေဒက်နှင့် ခရစ်တော်ဆင်တူသည်ဆိုရာတွင် “အဘမရှိ၊ အမိမရှိ ရှေ့မျိုးစဉ်မရှိ (ဆွေစဉ် မျိုးဆက်စသဖြင့်) စတင်နေ့မရှိဘဲ၊ ဘ၀နိဂုံးချုပ်သွားခြင်းလည်း မရှိခဲ့၍” ဖြစ်သည်။
ဤကဲ့သို့ ဆင်တူသည်ဆိုရာတွင် မေလခိဇေဒက်သည် သဘာ၀လွန်တန်ခိုးရှင်ဖြစ်၏ဟု မဆိုလိုပါ။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း၌ ဖော်ပြရာတွင် သူသည်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်မရှိ၊ သေဆုံးသွားခြင်းမရှိ ဟူ၍သာ ဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ အေ.ဒဗလျူဖိန့်တ်၏ ပြောကြားသည်မှာ မိဘမရှိခြင်းက ထူးခြားဆန်းပြားသော မှတ်သားဖွယ် ဖြစ်၏ဟု ပြောကြားသည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း) မွေးဖွားခြင်းမရှိ၊ သေဆုံးခြင်းမရှိ ဘိုးဘေးဘီဘင် ချန်လှပ် ဖော်ပြခြင်းမရှိခြင်းက သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အစီစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ယေရှုသခင်၏ ပြီးပြည့်စုံသောဘ၀ကို ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု (ibid, P. 160) ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘင်ဂျမင်ကိတ်စ် «၁၆၄၀ - ၁၇၀၄» ပြောကြားသည်မှာ - ထိုသူ၏ မိဘနှင့်ဆင်းသက်လာခြင်းကို မဖော်ပြခြင်းသည် ခရစ်တော်ပုံဆောင်ခြင်းကို ပို၍တူစေရန် ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၌ ဖခင်မရှိခြင်းသည် လူဇာတိစင်စစ်ဖြစ်ခြင်းကို ရိုသေလေးစားရန်ဖြစ်ပြီး၊ မိခင်မရှိခြင်းက ဘုရားစင်စစ်ဖြစ် ခြင်းကို ကြောက်ရွံ့ရိုသေရန် ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြသည်။ (Benjamin Keach Preaching From the Types and Metaphors of the Bible, Kregel Publications, 1972 reprint, P 973)/
မေလခိဇေဒက်နှင့် ခရစ်တော်ဘုရား ဇာတ်မြှုပ်ဆင်တူခြင်းသည် ကမ္ဘာဦးကျမ်းစာ၏ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိချန်လှပ်ခြင်းဖြစ်၍ မေလခိဇေဒက်၌သာ မဟုတ်ပါ။ ဟေဗြဲ ၇ ; ၃ ၌ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ခရစ်တော်၏ “လူသားကတိခံယူခြင်း” သည် “စတင်သောနေ့” မရှိသောဘုရားသခင်၏သား “သူသည် အစဉ်အမြဲ ဘုရားသခင်၏ ချစ်မြတ်နိုးသော သားဖြစ်ခြင်းကို ပြသနေခြင်းဖြစ်သည်။
၃။	တတိယ၊ မေလခိဇေဒက် ခရစ်တော်ပုံဆောင်ခြင်းသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ တူညီခြင်းဖြစ် သည်။
မေလခိဇေဒက်သည် “ဘုရားသခင်၏သားတော်နှင့်တူ၍ ယဇ်ပုရော ဟိတ် အရာ၌ အစဉ်အမြဲတည်၏ (ဟေဗြဲ ၇ ; ၃) ဆာလံဆရာက ပြောကြားသည်မှာ -
“ထာ၀ရဘုရားက သင်သည် မေလခိဇေဒက်နည်းတူ ထာ၀ရယဇ် ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်ဟု ကျိန်ဆို၍ နောက်တစ်ဖန် စိတ်ပြောင်းလဲခြင်း ရှိတော်မမူ” (ဆာလံ ၁၁၀ ; ၄)
ဟေဗြဲဩဝါဒစာ ၅; ၆ ၌ တစ်ဖန်ဖော်ပြသည်မှာ -
“ထိုသို့နှင့်အညီ ကျမ်းစာတစ်ချက်၌လာသည်ကား သင်သည် မေလဒိ ဇေဒက်နည်းတူ ထာ၀ရယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်ဟု လာသတည်း။ (ဟေဗြဲ ၅း၆)။
မေလခိဇေဒက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီး ယေရှုဘုရားကို ပုံဆောင်နေခြင်းဖြစ် သည်။ ဒေါက်တာ မက္ကီးပြောကြားသည်မှာ ဆာလံ ၁၁၀ ၌ ကြိုတင်ဟောကြားသော မေလခိဇေဒက်သည် ခရစ်တော်ယဇ်ပုရောဟိတ် ဖြစ်ခြင်းပုံရိပ်ကို ပြသခြင်း၏ အကြောင်းမှာ ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်၍ အစဉ်အမြဲ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးဖြစ်သည်။ ထိုအရာက ခရစ်တော်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်ခြင်းကို စောင့်ထိန်းပြီး ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်ခြင်း၌ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတော့ပါ။ အကြောင်းမှာ ထိုသခင်သည် ထာ၀ရယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်၍ ဖြစ်သည်။ (J.Vernon MC Gee, TH.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publisher, 1983, Volume VP, 552 note on Hebrews7: 3)/
မေလခိဇေဒက်သည် မောရှေမှ အာရုန်အား ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတာဝန် အပ်နှင်းခြင်းမတိုင်ခင်၊ ကာလကြာရှည်စွာ အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်။ အေ.ဒီ ၇၀၊ ရောမစစ်သားများမှ ဗိမ္မာန်တော်အား သိမ်းပိုက်ချိန် တွင် အာရုန်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်ခြင်း အဆုံးတိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထာ၀ရဘုရား၏ သားတော် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထာ၀ရယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဘင်ဂျမင်ခေ့ခ်ျက မေလခိစေဒက်နှင့် ခရစ်တော်ကြား နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြရာတွင် မေလခိဇေဒက်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ် အာရုန်မှ တစ်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်း ခန့်အပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆီလိမ်းဘိသိက်တင်သူလည်း မဟုတ်ပါ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဆီက တာဝန်လွဲယူခြင်းမရှိ ပါ။ ဘုရားသခင်၏ နုတ်တော်အမိန့်အားဖြင့် ကြေငြာသူဖြစ်သည်။ မေလခိဇေဒက်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ် ခြင်းသည် လူသားအားဖြင့် တရားဝင်ခွင့်ပြု၍ ဖြစ်လာခြင်းမဟုတ်။ အဆင့်ဆင့် လွှဲယူ၍မဟုတ်၊ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုလည်း မိမိ၏တာဝန်ကို မလွှဲအပ်ခဲ့ပါ။ ထိုကဲ့သို့ ခရစ်တော် «မေလခိဇေဒက် ပုံဆောင်ခြင်းပြည့်စုံသူ» ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်ခြင်းက လူသားဆီက ခံယူခြင်းမဟုတ်၊ ဘုရားသခင်က ခန့်အပ် ခြင်းဖြစ်သည်။ လူသားတို့အားဖြင့် ဆီလူးဘိသိက်ခံစေ၍ ယဇ်ပုရောဟိတ် ဖြစ်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုမိမိ၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီး ရာထူးအား မည်သူတစ်စုံတစ်ဦးကို မလွှဲအပ်ခဲ့ပါ။ ခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံ ၌ ထာ၀ရယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီး ဖြစ်ပါသည်။ (Benjamin Keach ibid, P 973)
ကျွန်ုပ်တို့၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီး ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များအဖို့ ပြီးပြည့်စုံသော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ပြုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကို လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် ယူတင်ခဲ့ပြီး အသွေး တော်ဖြင့် ဆေးကြောရန် သွန်းလောင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဟေဗြဲဩဝါဒစာ၌ မိန့်ကြားသည်မှာ -
“ယခုမှာ လူလက်ဖြင့်မဟုတ်၊ ဤလောကဓာတ်နှင့် မစပ်ဆိုင် သာ၍ ကြီးမြတ်စုံလင်သော တဲတော်၌ နောက်မင်္ဂလာအကျိုးတို့၏ ယဇ် ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သော ခရစ်တော်သည် ငါတို့အဖို့ ထာ၀ရ ရွေးနုတ် ခြင်း ကျေးဇူးကိုခံရ၍ ဆိတ်အသွေး၊ နွားကလေးအသွေးနှင့် မဟုတ် မိမိအသွေးတော်နှင့် သန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ တစ်ခါတည်းဝင်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား အညစ်အကြေးရှိသောသူတို့အပေါ်၌ ဖြန်းသော နွားအသွေး၊ ဆိတ်သွေး၊ နွားမကလေး၏ ပြာသည် သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌ စင်ကြယ်ခြင်းကို ပြုနိုင်သည်မှန်လျှင် ထိုမျှမက အပြစ်ကင်းသော ကိုယ်တော်ကို ထာ၀ရဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ တင်လှူ ပူဇော်သော ခရစ်တော်၏ သွေးသည်၊ သေခ်ြးနှင့် စပ်ဆိုင်သော အကျင့်ကို ပယ်ရှင်း၍ သင်တို့သည် အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရား သခင်ကို ဝတ်ပြုမည်အကြောင်း သင်တို့၌ ကိုယ့်ကိုကိုသိသောစိတ်ကို စင်ကြယ်စေခြင်းငှာ သာ၍တတ်နိုင်တော်မူသည် မဟုတ်လော”။ (ဟေဗြဲ ၉း ၁၁ - ၁၄)
“မိမိအသွေးတော်နှင့် သန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ တစ်ခါတည်းဝင်တော်မူ၏” ကာသိုလ်လစ်အသင်း တော်တွင်၊ အမှုတော်ဆောင်များသည် “ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း” ဖြစ်သည်ဟု ခံယူကြ၏။ ထိုကဲ့သို့ ခိုင်လုံသော အထောက်အထား သမ္မာကျမ်းစာ၌ မတွေ့ရပေ။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာ၌ သင်းအုပ်ဆရာများကို “ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း” ဟူ၍ ခေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ နှစ်ခြင်းသင်းဝင်နှင့် ကာသိုလစ်ခွဲထွက်များက ကြွဩွခင်ယေရှု ခရစ်တော်။ြွက တစ်ပါးသာလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ယေရှု ခရစ်တော်ကို ထပ်မံ၍ လူသားများအဖို့ လက်ဝါးကားတိုင်၌ ယဇ်မပူဇော်စေတော့ပါ။ “မိမိအသွေးတော်နှင့် သန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ တစ်ခါတည်း ဝင်တော်မူပြီးဖြစ်သည်။ (ဟေဗြဲ ၉ ; ၁၂)။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ အပြစ်သား များအဖို့ ယဇ်ပူဇော်စရာမလိုပါ။ အပြစ်သား ကျွန်တော်^မတို့အားလုံးအဖို့၊ ခရစ်တော်သည် အသွေးတော် သွန်းလောင်းပြီး ထာ၀ရအသက်အဖို့ အသေခံပေးပြီးဖြစ်သည်။
“သို့သော်လည်း ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် သန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ သူတစ်ပါးအသွေးနှင့် နှစ်တိုင်းအစဉ်ဝင်ရသကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည် အဖန် များစွာ ကိုယ်ကိုပူဇော်ရသည်မဟုတ်။ ထိုသို့ပူဇော်ရသည် မှန်လျှင် ကမ္ဘာဦးမှစ၍ အဖန်များစွာ အသေခံတော်မူရ၏။ ယခုမူကား ဤကပ် ကာလအဆုံး၌ တစ်ခါတည်းကိုယ်ကို ပူဇော်သောအားဖြင့် အပြစ်များကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းငှာ ပေါ်ထွန်းတော်မူ၏။ (ဟေဗြဲ ၉ ; ၂၅ - ၂၆)။
“မိမိကိုယ်ကို တစ်ခါတည်း ယဇ်ပူဇော်၍ ထိုအမှုကို ပြီးပြည့်စုံစေတော် မူပြီ (ဟေဗြဲ ၇ ; ၂၇)။
ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များအတွက် တစ်ခါတည်း အသေခံတော်မူပြီ!
အပြစ်အားလုံးအတွက် သန့်ရှင်းစေရန် တစ်ခါတည်း အသွေးတော်ကို သွန်းလောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယေရှုဘုရားသည် အပြစ် အတွက်သာ ယဇ်ပူဇော်ခဲ့ခြင်း မကပါ။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးဖြစ်သောကြောင့် အဖခမည်းတော်၏ လင်္ကျာတော်ဘက်၌ထိုင်၍ ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ကြားဝင်ဖျန်ဖြေ ဆုတောင်းပေးနေသည်။
“ထို့ကြောင့် အကြင်သူတို့သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင့် အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြ၏။ ထိုသူတို့၏ အမှုကို ကိုယ်တော်သည် စောင့်လျှက် ကာလအစဉ် အသက်ရှင်သောကြောင့် သူတို့ကို အစဉ်ကယ် တင်ခြင်းငှာ တတ်နိုင်တော်မူ၏။ (ဟေဗြဲ ၇း ၂၅)
(၁၇၀၇ - ၁၇၈၈ - ချားလ်ဝေလ်စလေ၊ ပြောကြားသည်မှာ၊
]အထက်အရပ်၌ ကျွန်ုပ်အဖို့ ဖြန်ဖြေရှာ၏။
အသွေးတော်တန်ခိုး၊ ထာ၀ရ မေတ္တာနှင့် ရွေးနုတ်ခဲ့
ကျေးဇူးပလ္လင်၊ သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်စားရ
(၁၇၀၇-၁၇၈၈ ချားလ်ဝေလေ၏ ငါ့ဝိညာဉ် နိုးထလော့)။
အဆုံးသတ်အားဖြင့် ယေရှုသည် ကြင်နာသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်ပါသည်။ ဟေဗြဲဩဝါဒစာ ၁၄း ၁၄-၁၆ ကို ဖွင့်ထားကြပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တတ်ရပ်လျှက် အသံကျယ်ကျယ်နှင့် အတူတကွ ဖတ်ကြား ကြပါစို့!
“ယခုမူကား ကောင်းကင်ဘုံထဲသို့ ကြွဝင်တော်မူသော ယဇ်ပုရောဟိတ် မင်းကြီးတည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏ သားတော်ယေရှုသည် ငါတို့၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း ဖြစ်တော်မူသောကြောင့် “ငါတို့သည် ဝန်ခံခဲ့ပြီးသောအရာ၌ တည်ကြည်ကြကုန်အံ့။ ငါတို့ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် ငါတို့ခံရသော ဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့် မကြင်နာနိုင်သောသူမဟုတ်။ ငါတို့ခံရသည်နည်းတူ အမျိုးမျိုးသော စုံစမ်း နှောင့်ယှက်ခြင်းတို့ကို ခံဖူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ သို့ရာတွင် ဒုစရိုက် အပြစ်နှင့် ကင်းလွတ်တော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် ငါတို့သည် သနားခြင်း ကရုဏာကိုလည်းကောင်း၊ တော်လျော်သော မစခြင်း၊ ကျေးဇူးတော်ကို လည်းကောင်း ခံရမည်အကြောင်း ရဲရင့်သောစိတ်နှင့် ကျေးဇူးပလ္လင် တော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြကုန်အံ့။ (ဟေဗြဲ ၄ ; ၁၄ - ၁၆)
ထိုင်နိုင်ကြပါပြီ။ ဒေါက်တာမက္ကီးပြောကြားသည်မှာ -
“ကျေးဇူးပလ္လင်တော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြပါစို့ (လွတ်လပ်စွာဖြင့်) ကျွန်ုပ် တို့သည် သခင်ယေရှုအား လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုဆွေးနွေးကြပါစို့။ မိတ်ဆွေတို့ မပြောမထွက်ဝံ့သော အရာကိုပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယေရှုသခင် ကို ပြောနိုင်ပေသည်။ သခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အစဉ်အမြဲ နားလည် ခွင့်လွှတ်တော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်အားနည်းချက်ကို နားလည်တော်မူ၏။ အတားအဆီးမရှိ လွတ်လပ်စွာနှင့် ချဉ်းကပ်နိုင်ပေပြီ။ ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံး သားထဲက ရှိသမျှကိုပင် ပြောပြနိုင်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ စိတ်နှလုံးသား ကို သူ့အား ဖွင့်ဟနိုင်ပေသည်။ (ဂျေ ဗန် နုန် မက္ကီး တီ အိပ်ခ်ျဒီ၊ အိုင်ဘီအိုင်ဒီç စာ ၅၃၇ - ဟေဗြဲ ၄ ; ၁၆ မှတ်စုအရ)။
ယေရှုဘုရားသည် စစ်မှန်သော ခရစ်ယန်တို့၏ “အချိန်တိုင်း၌” လိုအပ်မှုကို ကူညီထောက်ပံ့လျက် ရှိသည်။ သင့်အဖို့ ထိုနေရာ၌ ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ အဆိုးရွားဆုံးအချိန်၌ပင် သင်အားကူညီပေး ပါလိမ့်မည်။ သင်စိတ်ဖိစီးလေးလံ ထိုင်းမှိုင်းနေသောအချိန်၊ နှလုံးသားမွန်းကြပ်နေချိန်၌ပင်၊ ယေရှုထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီး အကူအညီတောင်းပါက “အချိန်တိုင်းအတွက် လုံလောက်သော ကျေးဇူးကောင်းကြီး” ကို ခံစားပါလိမ့်မည်။
သင့်ကို မစွန့်ပယ်ပါ။ သင်စိတ်ဖိစီးနေသည်ဖြစ်စေ၊ ဝန်လေးပင်ပန်းနေသည်ဖြစ်စေ၊ ယေရှုသည် ကူညီပါလိမ့်မည်။ သင့်ကို မစွန့်ပစ်ပါ။ သင်သည် အကြီးအကျယ် စိတ်နှလုံးကြေကွဲစဉ်တွင် သက်သာရာရပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာ သင့်ကို ထိုဝေဒနာမှ ယေရှုသည် လွတ်မြောက်စေပါလိမ့်မည်။ “အကယ်၍ သေမင်း၏အရိပ် လွှမ်းမိုးသော ချိုင့်ထဲသို့ လျှောက်သွားရသော်လည်း ဘေးအန္တရာယ်ကို မကြောက်ပါ။ အကြောင်းမူကား ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ လှံတံတော်နှင့် တောင်ဝှေးတော်သည် ကျွန်ုပ်ကို ချမ်းသာစေပါ၏။ (ဆာလံ ၂၃ ; ၄)။
မေလခိဇေဒက်သည် စိုးရိမ်စိတ်၊ ရင်တမမနှင့် စစ်ပွဲမှပြန်လာသော အာဗြံကို ကျွေးမွေးပြုစု၍ ကောင်းချီးပေးခဲ့၏။ သင်သည်လည်း သင့်အသက်တာ၌ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ကြုံတွေ့ချိန်မှာ ယေရှုသည် သင့်ဆီသို့လာပြီး ကောင်းကြီးပေး၍ ကျွေးမွေးပါလိမ့်မည်။
သင်သည် ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်မည်ဆိုပါက သင်သည် ခရစ်တော်ယေရှုထံသို့ အမြန်တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ သင့်ကို အလျင်းပယ်မည်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား “ခမည်းတော် သည် ငါ့အားပေးတော်မူသမျှသောသူတို့သည် ငါ့ထံသို့ လာကြလိမ့်မည်။ ငါ့ထံသို့လာသောသူကို ငါသည် အလျင်းမပယ် (ယောဟန် ၆ ; ၃၇)။ ယေရှုဘုရားထံသို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ ယေရှုသခင်သည် သင့်အပြစ် များကို ခွင့်လွှတ်ပြီး အဖိုးထိုက်သော အသွေးတော်မြတ်နှင့် ဆေးကြောသန့်စင်ပါလိမ့်မည်။
ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာ ဂရိတ်တန် အယ်လ်ချန်မှ ဆာလံ ၁၁ဝါ် ၁ - ၄ ကို ဖတ်ကြား ပေးသည်။
ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာ ဘင်ဂျမင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်ဒ်မှ ကျောက်မြဲကျူး ၁၉၀၃ - ၁၉၉၂၊ နော်မန်ဂျေကလေတန် သီကုံးသော ဓမ္မသီချင်း ကျူးဧပေးသည်။
မေလခိဇေဒက် - ခရစ်တော်ပုံဆောင်ခြင်း
ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှ ၆၁ ခုမြောက်သော ဒေသနာတော်
ဒေါက်တာ အာရ်.အယ် ဟိုင်မာ ဂျေ အာရ်
“ခေဒေါရလောမာနှင့် သူ့ဘက်ကနေသော မင်းကြီးတို့ကို လုပ်ကြံရာမှ အာဗြံပြန်လာသောအခါ၊ သောဒုံမင်းကြီးသည် ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှာ၊ ရှာဝေချိုင့်တည်းဟူသော မင်းကြီးချိုင့်သို့ ထွက်သွား၏။ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သော ရှာလင်မင်းကြီး မေလခိဇေဒက် သည်လည်း မုန့်နှင့်စပျစ်ရည်ကို ဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင် ကောင်းကင်မြေကြီးရှင်၊ အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သည် အာဗြံအားကောင်းချီးပေးတော်မူ ပါစေသော်ဟု အာဗြံကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသော်ဟု အာဗြံကို ကောင်းကြီးပေး၍ သင်၏ရန်သူတို့ကို သင်၏လက်၌ အပ်နှံတော်မူသော၊ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်လည်း မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်းဟု မြွတ်ဆို၏။ အာဗြံသည်လည်း ဥစ္စာရှိသမျှတို့ကို ထိုမင်းအား ဆယ်ဖို့ တစ်ဖို့ လှူလေ၏။ (ကမ္ဘာ ၁၄ ; ၁၇ - ၂၀)
ကမ္ဘာဦး ၁၄ ; ၁၆
၁။	မေလခိဇေဒက် - ခရစ်တော်ပုံဆောင်ခြင်းသည် နာမရင်းအနက်တူ၍ ဖြစ်သည်။
ဟေဗြဲ ၇ ; ၂၊ ရောမ ၃ ; ၂၁ -၂၆း ၅း၁၊ ကောလော ၁း၂၀
၂။	မေလခိဇေဒက်- ခရစ်တော်ပုံဆောင်ခြင်းသည် စတင်သည့်အကြောင်းရင်း
တူညီ၍ဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ၇ ; ၃
၃။	မေလခိဇေဒက်- ခရစ်တော်ပုံဆောင်ခြင်းသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌
တူညီခြင်းဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ၇ ; ၃၊ ဆာလံ ၁၁၀ ; ၄၊ ဟေဗြဲ ၅ ; ၆ç ၉ ;
၁၁ - ၁၄ç ၂၅-၂၆ ဟေဗြဲ ၇း၂၇ç ၂၅း ၄ ; ၁၄ - ၁၆၊ ဆာလံ ၂၃ ;
၄၊ ယောဟန် ၆း ၃၇